အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု - Yuko အနုညာတစီရင်
နေအိမ် / အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့် / အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု – Yuko အနုညာတစီရင်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်အတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု – Yuko အနုညာတစီရင်
27/07/2015 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိတွင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် THE အဘိုးပြတ်သည် DATE ရက်စွဲ – Yuko ခုံသမာဓိ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အဆိုပါအဘိုးပြတ်နေ့စွဲရှင်းလင်းစွာအရေးကြီးပါတယ်, ထိုသို့အစဉ်အမြဲနိုင်ငံတကာခုံသမာဓိအတွက်ပါတီများအားဖြင့်အကြံပြုနေ့စွဲနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ပါဘူး. အဆိုပါ Yuko ခုံသမာဓိဒီအမှတ်သရုပ်ဖော်.
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်နှစ်ခုအထင်ရှားဆုံးအဘိုးပြတ်ရက်စွဲများ, အမြင်တစ်ကွမ်တမ်အမှတ်ကနေ, ဒီဇင်ဘာလတွင် Baikal မှ Yuko ရဲ့အတင်းအဓမ္မလေလံတင်ခဲ့ကြ 2004 နှင့် Yuko နိုဝင်ဘာလအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ချွတ်လုပ်ကြံခံခဲ့ရသောနေ့စွဲ 2007. တောင်းဆိုသူ '' မူလပြောဆိုချက်ကိုအဆိုပါအဘိုးပြတ်ရက်စွဲသည်ဖြစ်စေ၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်သင့်ကြောင်းခဲ့တယ် 2007 နေ့စွဲပါသို့မဟုတ်ဆု၏နေ့စွဲ.
အဆိုပါခုံရုံးကိုတွေ့, သို့သော်, သင့်လျော်သောအဘိုးပြတ်နေ့စွဲတစ်ခုခုကိုဒီဇင်ဘာလဖြစ်သင့်ကြောင်း 2004 ဒါမှမဟုတ်ဆု၏နေ့စွဲ (သောကဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူ 30 ဇွန်လ 2014 ယင်း၏တွက်ချက်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်) (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, အတွက်. 1777) နှင့်တောင်းဆိုသူများအဆင့်မြင့်အဘိုးပြတ်ခွင့်သင့်ကြောင်း (ဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သော expropriations ဖြစ်ပေါ်ရှိရာအမှုဖြစ်နှင့်ပြည်နယ်တာဝန်ယူမှုအပေါ် ILC ဆောင်းပါးများနှင့်အညီသင့်ပါတယ်အဖြစ် (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, အတွက်. 1763)).
အဆိုပါခုံရုံးထို့ကြောင့်ဖော်ထုတ်သည့်ရက်စွဲများ၏တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ဖြေဆိုသူရဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၏စုစုပေါင်းငွေပမာဏကိုထူထောင်, ၏ရေးစပ်: 1) အဆိုပါအဘိုးပြတ်နေ့စွဲအဖြစ် Yuko အတွက်တောင်းဆိုသူများ '' အစုရှယ်ယာတန်ဖိုး, 2) ခုံရုံးဆုံးဖြတ်ထားသောခွဲဝေ၏တန်ဖိုးသည်အဘိုးပြတ်ရက်စွဲအထိ '' ဒါပေမယ့်အဘို့ '' Yuko ၏ expropriation Yuko အားဖြင့်ပေးဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်, နှင့် 3) ဤအပမာဏအပေါ် Pre-ဆုစိတ်ဝင်စားမှု (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, အတွက်. 1778). ခုံရုံးဟာ NYSE အပေါ် Yuko ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေစာရင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်တန်ဖိုးရှိဒါဟာဖြစ်ပါသည် (နှင့်ဆင်းသက်လာအကျိုးကျေးဇူးများကို) နှင့် Sibneft အတူ envisaged ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းတုံ့ပြန်တွေကပေါ်ကနေဖြစ်လွန်းမသေချာမရေရာခဲ့ကြနှင့်ဤကးပယ်ချ (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, 1779, 1780). ဤအမြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေကြပေမဲ့, ခုံသမာဓိခုံရုံးခဲမှန်းဆဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူနိုင်ပါသည်ပမာဏများအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပေးရန်.
မတောင်းဆိုသူများမဟုတ်သလိုဖြေဆိုသူရက်စွဲများအပေါ်တန်ဖိုးဖျော်ဖြေခဲ့သောအဖြစ်ခုံရုံးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်တွေ့ရှိ, ခုံရုံးဟာတန်ဖိုးသူ့ဟာသူလုပ်ခဲ့ (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, 1782). ဒါကနောက်ဆုံးဆုကို၏ကွမ်တမ်အပိုင်း၏အရေးအပါဆုံးရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်. မှုခင်းကျွမ်းကျင်သူများကမကြာခဏခုံရုံးကျွမ်းကျင်သူများကမှလမ်းညွန်ပေးသူတို့ကိုအချင်းချင်းကောက်ချက်ရောက်ရှိဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းအလိုရှိပါပေမယ့်လည်း, ခုံရုံးတောင်းဆိုသူများ '' နှိုင်းယှဉ်ကုမ္ပဏီများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြေဆိုသူရဲ့အတညျ့ဗားရှင်း၏အခြေခံပေါ်မှာရှေ့မှာ ထား. သတင်းအချက်အလက်များ ယူ. ချိန်ညှိသူ့ဟာသူလုပ် (ဗိုလ်လုပွဲဆုချီးမြှင့်, 1782) DCF နှင့်နှိုင်းယှဉ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာသိပ်စိတ်မချရဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်အဖြစ်.
M ကအလိုအရ. MacGregor (BDO, လန်ဒန်), ခုံရုံးရဲ့သုံးသပ်ချက်ကွက်တိဟာ DCF နည်းလမ်း၏ကန့်သတ်မှုကိုပြသ, ဘယ်လိုကြောင့်နှိုင်းယှဉ်ကုမ္ပဏီများအတည်ပြုအလွန်တန်ဖိုးရှိသောအဘိုးပြတ် tool ကိုဖွစျစနေိုစဉ်ကခြယ်လှယ်နိုင်ပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဘယ်လိုမှန်းဆ. အဆိုပါခုံရုံးရဲ့ချိန်ညှိ, သို့သော်, ထပြန်ခဲ့ကြဟန်ပါဘူး.
အဆိုပါခုံရုံးအတွက် Yuko '' ရှယ်ယာတန်ဖိုးကိုရှာတွေ့ 2007 အမေရိကန်ဒေါ်လာခဲ့သည် 61 ဘီလီယံအထိ, အတွက် Yuko '' ရှယ်ယာတန်ဖိုးကိုရယူဖို့ RTS ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ညွှန်းကိန်းများကလျှော့ချခံရဖို့ 2014 အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ 42 ဘီလီယံအထိ, ထို့နောက်အမေရိကန်ဒေါ်လာအချို့ချိန်ညှိပြီးနောက်ခွဲဝေထည့်သွင်း 45 ဘီလီယံနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ခွဲဝေအပေါ်အကျိုးစီးပွား7အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဦးစုစုပေါင်းဘီလီယံအထိ 94 ဘီလီယံအထိ. Yuko ၏တောင်းဆိုသူများ '' ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သကဲ့သို့ 70.5%, ယင်း၏လိုလားသူ rata ဝေစုနီးပါးအမေရိကန်ဒေါ်လာခဲ့သည် 67 ဘီလီယံအထိ. အဆိုပါခုံရုံးထို့နောက်လျှောက်ထား 25% အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဦးပမာဏကိုရောက်ရှိဖို့ contributory အမှားပုံ 50 ဘီလီယံအထိ.
တူညီသောနည်းစနစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဦးငွေပမာဏမှဦးဆောင် 16 ဒီဇင်ဘာမှာတွက်ချက်ဘီလီယံအထိ 2004 နေ့စှဲ, ဒါပေမဲ့, ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, ယင်းကိစ္စအငြင်းပွားပတ်သက်နေနှစ်ခုကိန်းဂဏန်းများ၏အဆင့်မြင့်ခွင့်ခံရဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်. အနုညာတခုံရုံးအသုံးပြုသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အဆိုပါအဘိုးပြတ်နေ့စွဲထို့ကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ခြားနားချက်ကိုယ်စားပြု 34 ဘီလီယံအထိ, ချီးမြှင့်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအများစုအဘို့အစာရင်းကိုင်.
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, Expropriation, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး, လန်ဒန်အနုညာတစီရင်, ရုရှားကအနုညာတစီရင်, ပြည်နယ်တာဝန်ယူမှု, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအနုညာတစီရင်